मेरो आईफोन एप्पल लोगो विगतमा सक्रिय छैन! यहाँ फिक्स छ। - आईफोन
मेरो आईफोन 5s चार्ज हुनेछैन
किन मानिसहरु मलाई मेरो आईफोन मा सुन्न सक्दैनन्
आईट्यून्स आईप्याडमा जोडिन सकेन किनकि यो एक पासकोड आईप्याड असक्षम संग बन्द छ
आईफोन मा डाटा के हो
मेरो आईफोनले एप्पल लोगो विगतमा सक्रिय पार्ने छैन! यहाँ फिक्स छ।
तपाईको आईफोन बुट गर्दा तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि यसले अनौंठो लामो समय सक्रिय भईरहेको छ। तपाईको आईफोन स्क्रिनले केवल एप्पल लोगो र अरू केहि देखाउँदछ र तपाईलाई के गर्ने थाहा छैन। यस लेखमा, म गर्नेछु तपाइँको आईपलले एप्पल लोगो विगतमा सक्रिय पार्ने छैन भने के गर्ने बताउनुहोस् ।
किन मेरो आईफोन एप्पल लोगो विगतमा सक्रिय छैन?
जब तपाईं आफ्नो आईफोन खोल्नुहुन्छ, यो सफ्टवेयर सुरू गर्दछ र सबै हार्डवेयर जाँच गर्दछ यो ठीक काम गरिरहेको छ भनेर निश्चित गर्नका लागि। एप्पल लोगो तपाईको आईफोनमा प्रदर्शित हुन्छ जब यो सबै भइरहेको छ। यदि बाटोमा केहि गलत भयो भने, तपाइँको आईफोन एप्पल लोगो विगतमा परिवर्तन गर्दैन।
दुर्भाग्यवस, यो प्राय: राम्रो गम्भीर समस्याको संकेत हो। जहाँसम्म, यो अझै पक्का गरिएको छ यो निश्चित गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईंले भर्खर आईफोनको अंश बदल्नु भएको छ र अहिले यो समस्या भइरहेको छ भने, यो अंश पुन: प्रयास गर्न राम्रो विचार हुन सक्छ। यदि तपाईंले भर्खर आफ्नो आईफोनको भाग बदल्नु भएको छैन भने, तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्!
तपाईको आईफोनलाई रिसेट गर्नुहोस्
कहिलेकाँही तपाईको आईफोनलाई पुनःस्टार्ट गर्न बाध्य पार्नु भनेको समस्या समाधान गर्न तपाईले गर्नुपर्ने सबै कुरा हो। तपाईको आईफोनले एप्पल लोगो विगतमा परिवर्तन गर्दैन, तपाईले हार्ड रीसेट गर्नु पर्छ। कडा आईफोन रिसेट गर्ने तरिका तपाईसँग कुन मोडेलमा निर्भर गर्दछ, त्यसकारण हामीले प्रत्येक उपकरणको लागि प्रक्रिया बिच्छेद गरेका छौं।
आईफोन s एस, आईफोन एसई, र पहिले
एकै साथ थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस् गृह बटन र पावर बटन (स्लीप / वेक बटन) स्क्रिन कालो नभएसम्म र एप्पल लोगो फेरि देखा पर्दछ।
आईफोन & र आईफोन Plus प्लस
थिच्नुहोस् र समाउनुहोस् भोल्युम डाउन बटन र पावर बटन एउटै समयमा। एप्पल लोगो प्रदर्शनमा पुन: प्रदर्शित नभएसम्म दुबै बटन समातिरहनुहोस्।
आईफोन,, आईफोन एक्स, आईफोन एक्सआर, आईफोन एक्सएस, आईफोन ११
थिच्नुहोस् र जारी गरेर सुरु गर्नुहोस् भोल्यूम अप बटन । त्यसो भए प्रेस गर्नुहोस् र छोड्नुहोस् भोल्युम डाउन बटन । अन्तमा, साइड बटन होल्ड गर्नुहोस् । एप्पल लोगो देखा नपरेसम्म साइड बटन होल्डिंग राख्नुहोस्। सुरूमा भोल्युम बटन थिच्न सम्झनुहोस्, वा अन्यथा तपाईं गल्तिले आफ्ना SOS सम्पर्कहरूलाई सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ!
तपाइँको आईफोनलाई DFU मोडमा राख्नुहोस्
TO उपकरण फर्मवेयर अपडेट (DFU) तपाईंको आईफोनको सफ्टवेयर र फर्मवेयरलाई इरेज र पुन: लोड गर्दछ। यस प्रकारको पुनर्स्थापना पनि अन्तिम चरण हो जुन तपाईले कुनै पनि प्रकारको आईफोन सफ्टवेयर समस्यालाई पूर्ण रूपमा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।
तल, हामीले आईफोनको विभिन्न मोडेलहरूको लागि DFU पुनर्स्थापना प्रक्रिया टुक्र्याएका छौं।
DFU पुरानो आईफोनहरू पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
पहिले तपाईको आईफोनलाई तपाईको चार्जिंग केबल प्रयोग गरेर आईट्यून्सको साथ कम्प्यूटरमा जडान गर्नुहोस्। त्यसो भए, एकै समयमा पावर बटन र होम बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्। लगभग आठ सेकेन्ड पछि, गृह बटन थिच्ने क्रममा पावर बटनमा जानुहोस्। होम आईफोन रिलीज गर्नुहोस् जब तपाईंको आईफोन आइट्यून्समा देखा पर्दछ।
यदि तपाईको आईफोन आइट्यून्समा देखा नपर्‍यो भने सुरुदेखि नै प्रक्रिया सुरू गर्नुहोस्।
सम्भावित हार्डवेयर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै
यदि तपाईंको आईफोन अझै पनि एप्पल लोगो विगतमा परिवर्तन गर्दैन, एक हार्डवेयर समस्या समस्या पैदा गर्दै छ। यो विशिष्ट समस्या अक्सर बोत्चेड मर्मत कार्य पछि हुन्छ।
यदि तपाईं तेस्रो-पार्टी मर्मत पसलमा जानुभयो भने, हामी त्यहाँ फर्कने सल्लाह दिन्छौं कि उनीहरूले समस्याको समाधान गर्दछन् कि भनेर। किनकी तिनीहरू जसमा कारणले हुन सक्ने हुन सक्छ, त्यहाँ एक अवसर छ कि तिनीहरूले तपाईंको आईफोन, नि: शुल्क निर्धारण गर्दछ।
यदि तपाईंले आफैंले केहि बदल्न प्रयास गर्नुभयो भने, तपाईं पहिले आईफोनलाई यसको मूल अवस्थामा फर्काउन चाहानुहुन्छ एक एप्पल स्टोर मा यो लिदै । एप्पलले तपाईको आईफोनलाई छुने छैन वा तपाईलाई बाहिरको वारेन्टी प्रतिस्थापन मूल्य प्रस्ताव गर्ने छैन यदि तिनीहरूले याद गरे कि तपाईले आफ्नो आईफोनको कम्पोनेन्ट गैर एप्पल भागका साथ बदल्नु भएको छ।
नाडी अर्को पल्ट राम्रो मर्मत विकल्प हो जुन तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। पल्स एक माग गरिएको मर्मत कम्पनी हो जसले एक योग्य प्राविधिक सिधा तपाईंको ढोकामा पठाउँदछ। तिनीहरूले घटनास्थलमा आईफोनहरू मर्मत गर्छन् र मर्मतको लागि आजीवन वारेन्टी प्रस्ताव गर्छन्।
नयाँ सेल फोनका लागि किनमेल गर्नुहोस्
एक महँगो मर्मतको लागि भुक्तान गर्नुको सट्टा, तपाईं त्यो पैसा प्रयोग गरेर नयाँ ब्रान्ड खरीद गर्न सोच्न सक्नुहुन्छ। फोन तुलना उपकरण जाँच गर्नुहोस् UpPhone.com प्रत्येक वायरलेस क्यारियरबाट प्रत्येक फोनको तुलना गर्न! धेरै समय, क्यारियरहरूले तपाईंलाई नयाँ फोनमा ठूलो सम्झौता प्रस्ताव गर्नेछन् यदि तपाईं स्विच गर्ने निर्णय गर्नुभयो।
एक एप्पल एक दिन
हामीलाई थाहा छ यो तनावपूर्ण छ जब तपाईंको आईफोनले एप्पल लोगो विगतमा परिवर्तन गर्दैन। अब तपाईलाई पक्का थाहा छ कि यस समस्यालाई कसरी ठीक गर्ने हो यदि यो कहिले फेरि भयो भने। पढ्नका लागि धन्यबाद। र हामीलाई जानकारी दिनुहोस् कि कसरी तपाईंले तलका टिप्पणीहरूमा तपाईंको आईफोन फिक्स गर्नुभयो!